Maxaa Keena in Ninka Raga ah uu Guska ka Jilco inta uusan Gaarin Da,da 30 Xiliyadan Danbe. - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxaa Keena in Ninka Raga ah uu Guska ka Jilco inta uusan Gaarin Da,da 30 Xiliyadan Danbe.
Sanadadaan banbe raga joga waxaa ay la kulmaan inta badan dhibaatoyin badan kuwaas oo laga yaabo in ay isku kenaa inta ay ku jiraan da,da dhalinyarada waayo dhalinyarnimo waa arin dhib badan waayo qofkas waxaa dhici karta in uusan kala aqoon wax dhib u keeni karta marka uu gaaro xiliga da.da ama duqnimada.
Xiliyadan danbe waxaa la arkay dhalinyaro badan kuwas oo xaga raganimda ay ka sii dhamanee taasna waa caqabda kaliya ee soo wajihi karta marka uu ninka raga ah uu marayo xiliga dhalinyarada.
Dhalinyarada hada joogta waxaa intooda badan la arkaa iyagoo isticmalaya kaniin kaas oo laga yaabo in in uu dhib weyn u keeni karo xiliyada danbe ee mustaqbalkisa hada maxaa keena in dhalinyarada sanadadaan uu ka jilco guska.
XAFLAD MAXAY UGA HLEEN HAWEENKEENA JAWAABTA ARAG